Hoyga internetka ee wanaagsan waa waajib saaran dhammaan bogagga iyo blogyada; BUT oo aan khasab ahayn inaad ku darto gacanta iyo lugta.
Ilaa hadda、waxaan tijaabinay dib u eegay in ka badan shirkadaha 60 martigeliyey。 Jadwalka hoose wuxuu muujinayaa qaar ka mid ah qorshayaasha martigalinta qiime jaban ee ugu wanaagsan ee aan ka helnay khadka tooska ah。 Shirkadahaani Waxy Bixiyaan Habka ugu Raqiisan ee Lagu marti-galiyo degel-Haddii aad raadineysay xallin miisaaniyadeed-iyagu waa kuwa iska hubiya.
CompanyQiimeeynta SaxeexaQiimaha CusbooneysiintaDomain-ka DiiwaangashanDomain Free？Socdaalka Soogalootiga Bilaash ahMoney Back
スー・ダウェインタ $ 0.80 /月 7.99ドル/月 1 マヤ はぁ 30 maalmood
InMotionホスティング $ 3.99 /月 7.99ドル/月 2 マヤ はぁ 90 maalmood
InterServer $ 5.00 /月 $ 5.00 /月 無制限 マヤ はぁ 30 maalmood
A2ホスティング $ 3.92 /月 7.99ドル/月 1 マヤ はぁ ワフティカスタ
HostPapa $ 1.67 /月 $ 9.99 /月 2 はぁ はぁ 30 maalmood
GreenGeeks $ 2.95 /月 $ 9.95 /月 1 はぁ はぁ 30 maalmood
TMDホスティング $ 2.95 /月 $ 4.95 /月 1 はぁ はぁ 60 maalmood
WebHostFace $ 0.69 /月 $ 6.90 /月 1 マヤ マヤ 30 maalmood
FastWebHost $ 2.97 /月 $ 5.95 /月 1 はぁ マヤ 30 maalmood
iPage $ 1.99 /月 7.99ドル/月 無制限 はぁ マヤ 30 maalmood
Qorshaha ugu qaalisan ee la saxiixo：$ 0.80 /月-Riix halkan si aad u dalbato hadda
Hostinger wuxuu bixiyaa adeegyo badan oo martigeliya、oo ka mid a kuwa ugu sareeya ee leh qorshaha martigelinta hawada ee VPS si ay u bilaabaan kuwa doonaya in ay ku bilaabaan martiqaad la wadaago.
Qorshaha ugu raqiisan ee macaamiisha-「シングル」waxaaラグqiimeeyaa $ 0.80 /月。 Qiimahawax ka yar hal doollar、waxaad uheleysaa inaad martigeliso websaydhka 1 oo leh xadka diskiga 10 GB iyo 100 GB帯域幅、oo lagu daro astaamo cusub sida shaqooyinka cron hore、Curl SSL、MariaDB iyo keydka InnoDB、keyha addha addha addヘリン。 kaヘルqorshaha martigelinta miisaaniyad.
Haddii aad diyaar u tahay inaad Waxyar ka badan bixiso、Qorshaha Marti-gelinta ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah（wuxuu ka bilaabmayaa $ 2.15 / mo）wuxuu la imanayaa BitNinja Smart Security oo bilaash ah、kaasoo kaa diacaya ifaaya tiro kale oo weerarro internetkaああ。 iyo Mail Assassin、oo kaa difaacaya farriimaha spam.
0.1.1 Dib udarsashada Degdegga ah：Waxa aan ka fikirayo Interserver
0.3.1 TMDマルティファーイイダダ & ハサーラハ
0.4.1 Faa’iidooyinka FastWebHost & カサアロインカ
0.6 Dhibaatada＃2：Meelaha la kiciy​​ey
0.6.1 Haddii aad ku socoto websaydh heerar ganacsi oo raadinaya qalab aad u awood badan、ka fiiri Nagios Uptime iyo Cacti. Dhibaatada＃3：deriska xun Mararka qaar、martida qiimaha jabanwaxy ku dhacaanwaxa loo yaqaan ‘deriska xun’. Derisyadaan xun ayaa ah kuwa isbaaraya kuwaas oo cunaya sahayda adeegga ama kuwa websaydka aan sharciga lahayn ee la jabsaday。 Haddii aad la wadaagto server-ka leh spamka、ma jiri doonto ilo kugu filan。 Haddii aad la wadaagto adeegsade qof leh tiknoolajiye ama fayraska kombiyuutarka、goobtaada ayaa laga yaabaa inay qaadsiiso sidoo kale. Xalka：Hubi martida IP-ga kahor intaan la gelin
0.7 Dhibaatada＃5：Taageero farsamo oo liita
0.7.1 Xalka：Akhri ToS; Ka fogow shirkadaha martigelinta raqiis ah oo leh siyaasad isticmaali karo su’aal
0.8 Dhibaatada＃7：Kordhinta kharashka ka dib muddada koowaad
0.8.1 Xalka-2：Ku duub shirkadaha bixiya qiimaha cusbooneysiinta
0.9 Dhibaatada＃8：mudada dheer ee rukumashada
0.9.1 Xalka：Ku dhaji marti-geliyaha u oggolaanaya 150,000 inod iyo kor
2 一言で言えば、ああ：Dhammaan Webka Guurtidu waa mid xun
Marka la soo koobo、waa tanwaxa aan jeclahay iyo ku necbaado ee ku saabsan Bogagga internetka。 Waxaadwaxbadan ka baran kartaa khibradeena ku aadan dib u eegista qotada dheer ee Martida.
シシラダsicir-bararka ayaa kordha muddada koowaad
Ku hay halドメインkaliya hal koonto
ラマ・ヘリン・ガリタンカSSH / sFTP ee Keli ah
Hawlaha adag ee serverka、wakhtiga kor ku xusan> 99.95％TTFB〜XNUMHMS
Qorshayaasha heerarka gelitaanka（La bilaabay）waxaa lagu soo buuxiyay dhamaan siyaabaha lagama maarmaanka u ah martigelinta website-ka ganacsiga
90 maalmood lacag celin dammaanad（warshadaha＃1）
Qorshaha ugu qaalisan ee la saxiixo：$ 5.00 /月-Riix halkan si aad u dalbato
Isaga oo loo aqoonsado bixiye raqiis ah oo raqiis ah、InterServer wuxuu ku takhasusay wadaagista、VPS、oo loo qoondeeyey、iyo xalinta wada-xaajoodka.
Labawaxyaalood oo aan jeclahaywaxa ku saabsan InterServer：
Shirkadu ma kordhin qiimaha ka dib markii muddada koowaad-InterServer wadaagista qorshaha martigelintawaxaa lagu xiraa $ 5 /月、iyo
Waxay u oggolaanayaan dadka isticmaala inay ku martigeliyaan domains aan xadidnayn oo ka hooseeya $ 5 / mo（qorshayaasha miisaaniyadeed ee aynu ka wada hadalnay qodobkanwaxay u oggolaanayaan hal domain midkiiba）
Labadan arrimoodwaxyaysameeyeen InterServer dooro sahlan marka aad qorsheyneyso in aad ku martigeliso shabakado badan oo ah（baabuurta yar yar）ee xisaabta hal jeer oo ka badan sanadada 5.
Dib udarsashada Degdegga ah：Waxa aan ka fikirayo Interserver
Waxaan bilaabay isticmaalka InterServer tan iyo 2013 oo booqday shirkadda HQ ee Seekaucus、New Jersey ee 2016。 Waxaad akhrin kartaa aniga faahfaahin dheeraad ah ee InterServer dib u eegis.
Ma bixiso magac bilaash ah（kharash dheeraad ah ee $ 15 / sanad）
Goobta xafiis ee Maraykanka oo kaliya-shirkaddawaxay dhisaan oo maamulaan xaruntooda xogta iyaga oo joogaニュージャージー.
Waxqabadka ugu wanaagsan eeサーバー; TTFB <550ms
Khatarta Khatarta AH-Marwalba lacagta Dammaanadda AH
Qorshayaasha heerarka gelitaanka（Lite）waxaa lagu soo buuxiyay dhammaan sifooyinka lagama maarmaanka u ah martigalinta ganacsiga
Xulashada goobaha adeegayaasha ee Maraykanka、Yurub、iyo Aasiya.
お父さんBadan oo qolka u koraya-dadka isticmaalawaxy kor u qaadaan soogalootigooda VPS、ダルルタ、iyo martigelinta marti gelinta
Qorshaha ugu qaalisan ee la saxiixo：$ 3.95 /月-Riix halkan si aad u dalbato
2006waxaa sameeyey Jamie Opalchuk、HostPapawaxyay ku taallaaオンタリオ、カナダ.
Waxaan ka waada hadalnayハウラハシルカダハイヨガナクシガ。 Mr Jamie wuxuu ahaa mid aad u hufan ooワックスku ool ah jawaabihiisa.
Waxaan raadineynay martigeliyaha webka tan iyo bartamihii2017。Waxaadワックスbadan ka baran kartaa khibrada aan ku leeyahay eeg faahfaahintan HostPapa.
Shakhsi ahaanwaxaan helay HostPapa oo ah hoy wanaagsan-ma ahan kuwa ugu fiican、laakiin qiimaha jaban ee raqiis ah waa hubaal weyn oo dheeraad ah-iyada oo tixgelinaysa in qorshaha ugu jahka aka ima aka uka aka uma aka uka aka uma aka uka aka iyo 120 bilaash ah oo lagu dhisay boggan.
Marka la soo koobo、waa kuwan faa’iidooyinka iyo daneynta ‘HostPapa’
Fursadaha la’aanta goobaha adeegga（martida Kanada oo kaliya）
Kharashka cusboonaysiinta qadarinta-Kharashka Qorshaha Bilawga ah $ 7.99 / bil kadib muddada koowaad
Cimilada bey’ada-300％cagaarka cagaaran（sare ee warshadaha）
Xawaaraha sare ee server-ayaa lagu qiimeeyay A iyo wixii ka sareeya dhammaan imtixaanka xawaaraha
お金の価値がある-$ 2.95 / mo si aad u marto goobo aan xadidnayn oo koonto ah（oo leh nuqul maalinle ah）
Qorshaha ugu qaalisan ee la saxiixo：$ 2.95 /月-Riix halkan si aad u dalbato
Marka ugu horeysa macaamiisha、qorshaha wadaagga ee TMD wuxuu ka bilaabmaa $ 2.95 / mo-60％qiimaha qiimaha cusbooneysiinta。 Shirkaduwaxy ku dhowdahay in ka badan sanado 10waxaana ku yaal afar xarumo xogeed oo ku baahsan Maraykanka iyo xarun xogeed oo dibedda ah ee Amsterdam.
Waxaan dhowaan la siiyay xisaab bilaash ah TMDHosting sidaa darteedwaxaan go’aansanay inaanu bixiyaha martigeliyaha u imtixaanno。 Diido-miisaaniyadda miisaaniyadda ma aha mid xun.
TMDマルティファーイイダダ & ハサーラハ
Waa tanwaxa aan jeclahay oo necbahay TMDホスティング.
Xoogaa aad u jaban-kaliya $ 0.69 / mo inta lagu jiro diiwaangelinta
Waxqabadkaサーバーee la aqbali karo、celceliska martigelinta wakhtiga kor ku xusan 99.9％
Meelaha martigelinta ee la hubiyay-Dhibaatada DDoS ee la dhisay iyo qalabka xoogan ee xooggan
Noocyada buuxa ee martigelinta xal loogu talagalay hagaajinta-loo maro VPS iyo marti gelinta martigelinta
Qorshaha ugu qaalisan ee la saxiixo：$ 2.97 /月-Riix halkan si aad u dalbato
FastWebHost（FWH）qorshaha martigelinta ugu jaban（oo loo yaqaan "値"）wuxuu ku bilaabmaa sida hooseeya $ 2.95 /月.
Waxaan jecel nahay qorshaha miisaaniyadda FastWebHost ee qiimaheeda iyo astaamaha amniga。 Waxaad heli doontaa xarun martigelin aasaasiga ah oo lagu daray Ilaalinta DDoS markaad saxiixdo Qorshaha Qiimeeynta.
Dib u eegista JasonのFastWebHostをお読みください。 Waxaan Sameynay baaritaanno fara badan oo ku saabsan FWHwaxyna u maleynayaan inay yihiin mid ka mid ah adeegyada ugu wanaagsan ee lagu wadaago ee India.
Faa’iidooyinka FastWebHost & カサアロインカ
Kuwa ka fikiraya FastWebHost、halkan waa aragti deg deg ah oo ku saabsan faa’iidooyinka iyo khasaaraha.
Ku marti halドメインkaliya leh xisaab 20 GB kharashka koontada
75％Qiimo Dhimis Lagu Saxiixay-La Wadaago martigelinta $ 1.99 /月
Meesha hal sano oo bilaash ah oo loogu talagalay macaamiisha cusub（keyd ah〜$ 15）
Newbie-saaxiibtinimo：Hannaan ku haboon
Xalka：Si aad ah u taxaddar inta lagu jiro jeegga
Si aad ah u taxaddar inta lagu jiro nidaamka jeegga、hubso in shirkadda martigelisay aysan ku soo saxiixin barnaamijka ama adeegga internetka。 Waxaad ka hubin kartaa martigeliyaha martigelinta taageerida sheekadaada haddii aad shaki qabto oo aad weydiiso haddii aad saxiixday ilaa adeegyoインターネットah.
Ka walwalsan e-emiri kasta iyo talooyin aad ka hesho shirkadda martigelinta。 Iska ilaali in aad indha la tiigsato oo aad cilmi baaris ka sameyso ka hor inta aadan saxiixinワックスkasta oo ku dari kara xisaabtaada.
Marka la soo gaabiyo、noqo macaamiil caqli badan-waadna hagaagi doontaa.
Dhibaatada＃2：Meelaha la kiciy​​ey
Shirkadaha miisaaniyadda qaarkoodwaxay u muuqdaan inay kordhinayaan awoodooda iyo martigelinta habab badan oo ka mid ah hal server.
タババルカワックスアールーヤカーンサイダコルメリド。 Inkastoo korjoogteyntu ay wanaagsan tahay in la keeno kharashka martigelinta hoosta（wax badan ka baro maqaalkayga kale-Xaqiiqada Unlimited Hosting）; mararka qaar khatar gelin kara khibrada isticmaalaha。 Meelaha lagu martiqaaday serverka dad badaniwaxay keenaysaa hoos u dhac ku yimaada jawaab celinta iyo wakhtiyo badan oo soo noqnoqonaya.
Haddii aad ku socoto websaydh heerar ganacsi oo raadinaya qalab aad u awood badan、ka fiiri Nagios Uptime iyo Cacti.
Mararka qaar、martida qiimaha jabanwaxy ku dhacaanwaxa loo yaqaan ‘deriska xun’.
Derisyadaan xun ayaa ah kuwa isbaaraya kuwaas oo cunaya sahayda adeegga ama kuwa websaydka aan sharciga lahayn ee la jabsaday。 Haddii aad la wadaagto server-ka leh spamka、ma jiri doonto ilo kugu filan。 Haddii aad la wadaagto adeegsade qof leh tiknoolajiye ama fayraska kombiyuutarka、goobtaada ayaa laga yaabaa inay qaadsiiso sidoo kale.
Xalka：Hubi martida IP-ga kahor intaan la gelin
Waxaa lagu talinayaa in aad eegto boggaaga internetka ee IP-ga SpamHaus Block List sida ugu dhakhsaha badan ee aad xisaabtaada u heshay。 Ama ka sii fiican、weydii liiska IP-yada si loo eego ka hor intaadan saxiixin.
Si loo go’aamiyo cinwaankaaga IP-ga、ku qor lambarka soo socda ee kombuyuutarkaaga kombiyuutarka.
Haddii nasiib daro in server-gaaga IP uu ku jiro liiska、waxaa jira labawaxyaalood oo kaliya oo aad sameyn kartid：1. Riix hoyga internetka si aad u akhristo caddaanka IP; iyo 2. codsiga dib u dejinta ama isbedelka cinwaanka IP.
Dhibaatada＃5：Taageero farsamo oo liita
Shirkadaha martigelinta raqiiska ah qaarkood Waxy Leeyihiin Taageero Macaamiil Xumo Waxayna Ku Guuldareystaan​​ inay ka jawaabaan codsiyada macaamiisha waqtigooda。 Waqtiyada jawaabta gaabiska ah marwalba sabab uma ahan daryeel la’aan。 Xaaladaha qaarkood、martigaliyayaasha jaban ayaa si fudud aan lahayn xubno farsamo oo ku filan oo ay uga qaybgalaan codsiyada taageerada macaamiisha.
Xalka：Akhri ToS; Ka fogow shirkadaha martigelinta raqiis ah oo leh siyaasad isticmaali karo su’aal
Iska ilaali、waxaan ku celinayaa、iska ilaali hoygooda internetka oo raqiis ah oo bixiya khidmada ganaax aan macquul ahayn.
Akhri TOS（calaamada degdegga ah：u tag bogga loo yaqaan ‘ToS’ ee bogga、riix Ctrl + F、raadi erayga muhiimka ah ‘joojinta’ iyo ‘lacag celin’）si cad u hubso sida loo joojin lahaa。 Hoyga webka ayaa laga yaabaa in lagu dalaco diiwaangelinta domainka（oo laga yaabo inuu ku kaco hal mar oo ah $ 25）iyo khidmadda SSL; laakiinワックスkasta oo intaas ka badan waa tan aan tegin.
Waxaa jira had iyo jeer shuruudaha iyo xaaladaha ka dambeeya soo jiidashada raqiis raqiis ah（wax dheeri ah baro）.
Dhibaatada＃7：Kordhinta kharashka ka dib muddada koowaad
Shirkadaha martigelinta ee ugu wanaagsani had iyo jeer ma joogaan raqiis.
Dhab ahaan、macaamiil badan oo qiimo jaban、ka dibna jooji qiimaha cusbooneysiinta laba ama saddex sano kadib.
Nasiib darro、tani waa xeerarka warshadaha。 Shirkadahaas badankoodu way waayaan lacagta inta lagu jiro labada ama saddexda sano ee ugu horreysa ee ay haystaan​​ macaamiil、sidaas awgeedwaxay qiimeeyaan sicirka sare si ay dib uguso soara celiyaan。 Qaar badan oo macaamiisha ah ma ogaanayaan inay bixinayaan qiime sarewaxayna helayaan shoog adag marka ay arkaan lacagta baabuurta ee ku qoran warqadda kaararka deynta.
Xalka-2：Ku duub shirkadaha bixiya qiimaha cusbooneysiinta
Shabakadaha miisaaniyadda qaarkoodwaxay marti galiyaan macaamiisha inay ku xiraan qiimaha cusboonaysiinta qiimaha hoose marka la saxiixo.
Tusaale ahaan、InterServer iyo FastCometwaxay qafilaan qiimaha cusbooneysiinta qiimaha saxda ah.
Qiimaha aad u qorto waa qiimaha aad cusbooneeysiineyso cusbadaada martigelinta mustaqbalka。 Tusaale ahaan、FastComet macaamiisha kuwaas oo saxiixa seddex sano $ 2.95 / bishii Waxay awoodi doonaan inay dib u cusbooneysiiyaan qorshooyinkooda mar dambe $ 2.45 / bishii。 Isla waa isku mid InterServer-kaas oo u oggolaanaya macaamiisha inay cusboonaysiiyaan qiimaha saxda ah.
Dhibaatada＃8：mudada dheer ee rukumashada
Sannado badan ka hor Lunarpages suuq gashay wada-xaajoodka la wadaago sida $ 4.95 /月。 Laakiin heshiiska $ 4.95 / mwaxaa kaliya loogu talagalay macaamiisha kuwaas oo diyaar u ah inay bixiyaan sanadaha 5 ee hore-taas oo ah rip off-off。 5佐野ああ！ワックスkastaワックスku dhici karaanインターネットka xilliga 5 sanadka、shirkada martigelinta ayaa kaliya qaadan karta lacagtaada iyo dukaanka dhaw.
Xalka：Ku dhaji marti-geliyaha u oggolaanaya 150,000 inod iyo kor
Aniguワックスbadan baan ku fekerayaa maalmo maalmahan、laakiin ma aanan tegeynin marti-geliyeyaasha 50,000.
Xalka ugu sahlan ayaa ah inaad aqrisoシルカダToS eeシルカダ（talo bixin deg deg ah：u tag bogga martigelinta ToS bogga、riix Ctrl + F、raadinta ereyga muhiimka ah sida ‘inodes’iyo’a’i’a’d’i’a’díríakirada silasha.
Dhinaca kale、waa masuuliyadaada inaad ku xaddiddo tirada lambarada ku jira xisaabtaada。 martigelinta aan xadidnayn aysan xadidnaynのFahmaan。 Hayso faylasha la duubay ee koontadaada、tirtirto faylasha aan loo baahnayn、tirtirto emaylada si joogto ah（boorka faaruqa iyo xayeysiisyada u soo dir PC-gaaga）、iyo in la xoojiyo xogtaada.
Tusaale Ahaan：marti-geliyuhu wuxuu u ogolaanayaa ilaa 250,000 inot ka mid ah xisaabaadka marti-galinta la wadaagayo（taas oo ah deeqsi $ 2.15 / mo ah）。ワックスバダンカバロdib-u-eeggeena martida.
Jawaabtu waa $0。カスタoo ay naadir tahay、ハッダナwaxaa jira dalabyo marti-gelis websaydh ah oo bilaash ah sida ‘000Webhost’ oo la socdaサブドメイン（tusaale。 aad ku socodsiiso degel kharash kharash eberああ。 Waxaa jira、si kastaba ha noqotee、xaddidaadyo iyo khataro kala duwan oo ku lug leh marti-gelinta bilaashka ah-haddii aad awoodid inaad bixiso $ 3-$ 10 bishii、Waxanan si xoog leh kuugula talinayaa inady aadya ayaadaya ayaadaya ayaadaya ayaadaya ayaadaaka aad raac Lahayd.
Martigeliyaha martigeliyaha ee la wadaago wuxuu bilaabmaa $ 0.90 bishii-waa kuwa ugu raqiisan kuwa bixiya martigaliyayaasha ugu sareeya。 Si loo qiimeeyowaxqabadka martigeliyaha、waxaan ku marti qaadaa goobta tijaabinta mashiinkoodawawaanan ku daabacaa xogta waqtigeeda / xawaaraha aan soo qaado halkan。 Waad ka aqrisan kartaa waaya aragnimadayda tan si faahfaahsan dib u eegista Hostinger.
Waxaa jira afar nooc oo waaweyn oo marti-gelinta websaydhada ah oo la wadaago、server-ka gaarka loo leeyahay ee gaarka loo leeyahay（VPS）、daruur、iyo marti-gelinta server ka go’an。 Mid Kastaa Wuxuu Bixiyaa Heerar Kala Duwan oo Waxqabadka、Isku Halleyn AH、Iyo Amniga.
Bixiyeyaasha sida Wix iyo 000Webhost Waxay Bixiyaan qorsheyaal bilaashああ。 Si kastaba ha noqotee、marti sharaf badan oo websaydh ah ayaa sidoo kale bixiya waqtiyo tijaabo ah oo ku saabsan qiimeynta martigelin macquul ah oo qiimo lehwaxaananan kugula talineynaa inaad isahabain inaad istabaan inkua.
Wix runtiiwaxay bixisaa qorshe bilaash ah oo xadidan。 Si kastaba ha noqotee、qorshahan bilaashka ahi wuxuu la yimaadaa dib-u-dhacyo badan oo ay ka mid yihiin awood la’aanta ku-xirista boggaaga caadada ah iyo xayeysiinta Wix ee ku taal bartaada.
WordPress CMS laftiisa ayaa xor u ah inaad istcimaao sidoo kale waad u isticmaali kartaa si bilaash ah WordPress.com（iyadoo xadidan tahay）.
Marti-gelinta bilaashka ah guud ahaan kuma habboona isticmaalka muddada-dheer ilaa aad ka-talo-galeyso inaad maamusho websaydh aad u hooseeya、cabbirka taraafikada oo hooseeya。 Bogagga intarnetka badankoodwaxay u baahan doonaan ilo badan inta ay weynaanayaan mana u eg tahay in marti-gelinta bilaashka ahi ay awoodi doonaan inay la jaan qaadaan kobacaas.
一言で言えば、ああ：Dhammaan Webka Guurtidu waa mid xun
Shirkadaha aan la wadaagin dhammaantood waa kuwo xun。 Qorshaha martigelinta aan xadidneyn ee aan la wadaagin ayaa ah kuwo aad u caan ah oo xooggan maalmahan。インカバダン90％shakhsiga ayaa martigelinaya domain iyo goobaha qorshaha martigelinta la wadaago.
カマサメシッド ‘クーラー’ボギーダアマシカワカンサバブトゥーああワックスアドドアナイザーザールカーリーああMa aha in la sheego-haddii aad isbarbardhigto、waxaa jirawaxyaabo badan oo qalad ah oo aad u khaldan oo la xariira martigelinta ama VPS martigelinta.
Qaar ka mid ah milkiilayaasha goobta ayaa loo wareejiyay VPS ama martigelinta khaaska ah si fudud sababtoo ah kibirkooda-oo ah nooca fikirka halka ay moodayaan inay ka duwan yihiin oo ka roon yihiin。 Laakiin taasi run ma ahan。 Xaqiiqdii、waan ogahay qaar ka mid ah milkiilayaasha ganacsiga yar yar oo u weecday martigelinta u heellan markii aysan u baahnayn、wayna ka qoomameeyeen。 Waxay ku kharash gareeyeen kheyraadka kombuyuutarrada ee aan loo baahnayn iyo kaaliyaha farsamada khibradeed markii marti-gelinta la wadaago ay fiicnaan laheyd.
Ilaa aad ka dhistay bogga gaadiidka barta / blogka、ma jirto baahi loo qabo in waqti badan iyo lacag badan lagu daro qorshe awood leh。 Waa waqti qashin ah oo waqti iyo lacag ah.
ベデルキード、waxaad diiradda saartaawaxyaabaha ku jira iyo suuq geynta.
Haddii aad iibsaneysoワックスaadan u baahnayn、waxaad lumineysaa lacag iyadoo aan loo eegin sida rakhiis ama ay fiican tahay.
Taasi waa sababta aad u baahan tahay inaad ogaato baahidaada martigelinta ee adiga ka hor dooro marti-geliye cusub。 Ka hor intaadan ka bixin boggan si aad u iibsato martigeliye、hubi inaad haysatid fahamka aasaasiga ah ee martida webka iyo magac domain。 Si taxadar leh uga feker baahidaada iyo ka jawaab su’aalahan –
Ma rabtaaワックスcaadi ah?
Ma u baahan tahay barnaamij gaar ah ooソフトウェアah（つまり、PHP）?
Miyuu websitkaagu u baahanyahayソフトウェアgaar ah?
Intee in le’eg（ama yaryar）mugga wadada mareegta ayaa tagi kara?
Muxuu yahay 12（ama 24）miisaaniyad bilo ah bogga internetka?
Dooro marti-geliye websaydh ah oo aad awoodi kartid ugu yaraan sanado 2.
Uma baahnid adeegyo degel marti-gelis heer sare ah hadda。 Hanti-wadaag webka la wadaago oo la awoodi karo waa inuu ku fiicnaadaa hadda。 Kaliya xasuuso inaad hubisowaxyaabaha ku saabsan xaddidnaanta booska iyo waqtiga serverka.
Waqtiga hadda waa in aad diirada saartaa dhismahawaxtar leh iyo kordhinta bulshadaada。 Waad in aadワックスbadan ku bixisid suuqgeynta iyoコンテンツ。 Hel adeega warside wanaagsan oo billow dhismaha liiska emailkaaga、bilaw xayeesiinta suuq-geynta warbaahinta bulshada、waxaad la xiriirtaa bloggers gudaha ah oo aad kireysaneysid si aad kor ugu qaadatid blogkaaga.
Weydii su’aalaha ku saabsan adeegga macaamiisha iyo haddii ay kaa caawin doonaan inaad fahamto website-ka sababtoo ahwaxaad ku cusub tahay blogging.
Miisaaniyadda la soo jeediyey Webホストフレンドリー：A2ホスティング、サーバー間、ダルウラハ
Hoyga internetka ee wanaagsan waa waajib saaran dhammaan bogagga iyo blogyada; ALE oo aan
Hoyga internetka ee wanaagsan waa waajib saaran dhammaan bogagga iyo blogyada; BET oo aan
Hoyga internetka ee wanaagsan waa waajib 사란 dhammaan bogagga iyo blogyada; 그러나 oo aan